Weerar Bambaano oo lagu qaaday Guriga Xaaji Baakiin ee magaalada Bosaso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Weerar Bambaano oo lagu qaaday Guriga Xaaji Baakiin ee magaalada Bosaso
Weerar Bambaano oo lagu qaaday Guriga Xaaji Baakiin ee magaalada Bosaso
Waxaa caawa weerar bambaano lagu qaaday gurriga uu magaalada Bosaso ka degen yahay Ibraahim Cartan Ismaaciil(Xaaji Bakiin), oo horey u ahaan jiray Wasiir kuxigeenka Arrimaha Guddaha iyo Amniga ee Puntland.
Gurriga Xaaji Bakiin oo ku yaal meel aan saa uga fogeyn Masaajidka Caanka ah ee Masjidu Rowda, sidoo kalena dhanka dhabarka ka xiga xarunta Shirkada Isgaarsiinta ee Golis, ayaa caawa lagu tuuray bambaano.
Qaraxa halkaasi ka dhacay ayey si weyn ugu argagaxeen dadkii fiidnimada caawa ah ku sugnaa nawaaxigaasi.
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in labo kamid ah Illaalada Xaaji Bakiin uu dhaawac culus kasoo gaaray weerarkan, sidoo kale Xaaji Bakiin laftiisa ayaa la sheegay in dhaawac uu kasoo gaaray qaraxa, walow ay sheegayaan wararka in dhaawaciisa uu fududyahay.
Labada askari ee illaalada u ahaa Wasiir kuxigeenkii hore arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Puntland, ayaa la dhigay Isbitaalka Puntland Hospital ee ku yaal Bosaso.
Weerarkan ayaa caawa dhacay ayadoo xalay magaalada isla goobta weerarka uu caawa ka dhacay meel wax yar u jirta lagu dilay Cabdullahi Mahdi Sayidka oo ahaa Guddoomiyaha ururka iskuxirka Ardayda Soomaaliyeed.
Ciidamada Booliiska ayaa caawa markii uu qaraxan dhacay bilaabay baaritaan xoogleh oo ay kusoo qabqabteen dhamaan wixii dad ku sugnaa aaga uu Qaraxa ka dhacay, ayadoo la arkayey gaadiidka Shabaqlaha oo dad badan oo ay Booliiska tuhmeen lagu aruuriyey kuwaasi oo la sheegay in hada lagu hayo Saldhiga Booliiska ee ku dhexyaal Dekkada weyn ee Bosaso.
Wixii war ah oo arrintan kusoo kordha gadaal baan idiinka soo gudbin doonaa haduu eebo idmo.
Tagged With: Bosaaso, Qarax Bosaso